Hay’ada Human Rights Watch oo Dawlada Somaliya fadeexeeysay (Warbixin kooban) - iftineducation.com
Hay’ada Human Rights Watch oo Dawlada Somaliya fadeexeeysay (Warbixin kooban)
iftineducation.com – War bixin cusub oo ay maanta oo isnin ah soo saartay hay,ada xaquuqda adaanaha u dooda Human Rights Watch ayaa ugu baaqday xukuumada Soomaaliya baritaan cusub oo runta ku saleysan ay ku sameyso kufsi wadareed ay askar AMISOM ah kula dhaqaaqen gabar Soomaali ah.
HRW ayaa sheegtay in falka oo dhacay Bishii Agust gudina loo saaray inay soo baaran ayaa waxa ay ku tilmaantay in si wanaagsanen loo maamulay kiskasi kufsiga baritaanka lagu waday.
Gabar Soomaali 20-sano jir ah ayaa sheegtay bishii Agust in laga afduubay mid kamid ah wadooyinka magaalada Muiqdisho ayna afduubeen ciidamo Soomaali ah ayna si awood ah ay ku sareen gaarigi ay wateen kadibna waxana ay u geeyen askarta AMISOM ee howgalka u jooga Soomaaliya,waxa ay gabadhasi ay sheegtay in kufsi wadareed ay ciidamada AMISOM kula dhaqaaqen.
HRW ayaa sheegtay in xukuumada Soomaaliya ay si aan wanagsaneejn u wajahday kiska kufsiga ah ee AMISOM lala xiriiriyay.
Agaasimaha HRW ee arimaha xaquuqda haweenka Liesl Gerntholtz ayaa sheegtay inay saraakisha Soomaaliya ay ka gabinayaan Kiskaasi kufsiga la xiriira.
Liesl Gerntholtz ayaa sheegtay in masuuliyinta Soomaaliya ay balan qaaden in dhamadka bishani November aysoo saarayan xogtii ay arimahaasi ka soo uruuriyeen balse waxa ay shaki galisay in warbixinta ay noqoto mid runta ka fog.
AMISOM oo kiiskaani ka hadashay waxa ay beenisay eedeynta loso jeediyay.
Liesl Gerntholtz ayaa tiri”saraakisha Soomaaliya iyo ciidamada Midowga Afrika AMISOM kama dhigi karaan eedeymaha la xiriira gacan kahadalka jinsiga inaysan baa bi in karin ayna ku badali karin warbixino been abuur ah”.
Ugu danbeentii warbixinta HRW ayaa lagu shegay in laga doonayo wadamada ay ciidamada kaga sugan yihiin Soomaaliya ay qaadan talaaboyin madax banana runtana ku dheehan tahay oo lagu sameeyo kiiskasi kufsiga ah si cidii ka danbesay cadaalada loo horgeeyo.
Guul:Burcad K/Afrikaan dhac ugeysan rabay dukaamo Somaliyeed oo la dilay